အောင်ဆန်းစုကြည် စင်္ကာပူ | ကုန်စည်အမျိုးအစား အားလုံးအတွက် ထိရောက်သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
Trucking ဆိုသည်မှာ ကုန်တင်ကားမှတဆင့် တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ ကုန်ပစ္စည်းများတင်ဆောင်ရန်အတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်တွင် အသုံးပြုသည့်အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ သယ်ယူ ပို့ဆောင်နိုင်သော ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး (ဥပမာ- ပျက်စီးလွယ်သော ကုန်ပစ္စည်းများ၊ အန္တရာယ်ရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် မီးလောင်လွယ်သော ကုန်ပစ္စည်းများ) သည် သဘာဝအတိုင်း ကျယ်ပြန့်လာသောကြောင့် သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်သော မော်တော်ယာဉ် အမျိုးမျိုး ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကုန်တင်ယာဉ်သည် အများအားဖြင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် တစ်ခုတည်းသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပုံစံမဟုတ်သောကြောင့် ၎င်းကို လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး သို့မဟုတ် လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုကဲ့သို့သော အခြားနည်းလမ်းများနှင့် တွဲသုံးလေ့ရှိသောကြောင့်၊ ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး.
ကုန်တင်ကားဝန်ဆောင်မှု၏ အဓိကအမျိုးအစား2ခုရှိသည်။ ကုန်တင်ကား ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် ကုန်တင်ကား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ပေးဆောင်လေ့ရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ပုဂ္ဂလိကထရပ်ကားဝန်ဆောင်မှုများသည် သင်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် ထရပ်ကားတစ်စီး သို့မဟုတ် ထရပ်ကားတစ်စီးကို တစ်ဦးတစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်သည် သို့မဟုတ် ငှားရမ်းခြင်းဖြင့် ပေးဆောင်သည်။
ကုန်တင်ကားဝန်ဆောင်မှု လိုအပ်ပါသလား။ M&P သည် သင့်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော အဖြေတစ်ခု ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်၊ သင့်မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများကို အီးမေးလ်ဖြင့် မေးရုံ သို့မဟုတ် ချက်ခြင်းကိုးကားချက်ရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံရှိ ဖောက်သည် ဝန်ဆောင်မှု ဝန်ထမ်းများသည် သင့်အား ကူညီပေးရန် ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
ကုန်တင်ယာဉ်၏ လုပ်ငန်းစဉ်များသည် အဘယ်နည်း။
သင်သည် X အမှတ်တံဆိပ်၏ နောက်ဆုံးပေါ် အားကစားဖိနပ်တစ်ရံကို ရောင်းချနေသော စင်ကာပူရှိ လက်လီအရောင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ရောင်းအား ကောင်းသွားသည်ကို သတိပြုမိပြီးနောက်၊ ဂျိုဟောရှိ စက်ရုံမှ အတွဲ 500 ကို မှာယူခြင်းဖြင့် ဖိနပ်များကို သိုလှောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ စာချုပ်ချုပ်ပြီးပြီ။ ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူ ဖိနပ်များကို စင်္ကာပူရှိ စတိုးဆိုင်သို့ ပို့ဆောင်ရာတွင် ကူညီပေးရန်။ အခုနောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို စူးစမ်းလေ့လာကြည့်ပါမယ်။
ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူသည် ထရပ်ကားကုမ္ပဏီနှင့် ဖိနပ်များကို ထုပ်ပိုးသယ်ယူရန်အတွက် ဂျိုဟိုးမြို့ရှိ စက်ရုံသို့ ထရပ်ကားတစ်စင်းပို့ရန် ကုန်တင်ကားကုမ္ပဏီနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည်။ ထရပ်ကားမောင်းသူအား ရှင်းလင်းရေးစာရွက်စာတမ်းများ ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။
လက်ထဲတွင် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြင့် ကုန်တင်ကားသည် စင်ကာပူဘက်သို့ မောင်းနှင်မည်ဖြစ်သည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခြင်းမပြုမီ အကောက်ခွန်အရာရှိများသည် ကုန်တင်ကားမောင်းသူထံ ပေးအပ်ထားသည့် လိုအပ်သောရှင်းလင်းရေးစာရွက်စာတမ်းများကို စာရွက်စာတမ်းများတွင် ရေးထားသည့်အတိုင်း တစ်စုံတစ်ရာသွေဖည်ခြင်းမရှိကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြီးနောက် အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး ထို့နောက် စင်္ကာပူသို့ဝင်ရောက်ကာ ထရပ်ကားကို ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပြီး သင့်ဆိုင်တွင် သိမ်းဆည်းထားမည့် ထရပ်ကားကို နောက်တစ်ကြိမ်ဝယ်ယူသူများအတွက် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
Trucking ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ
ကုန်တင်ကားဝန်ဆောင်မှု မကြာခဏဆိုသလို သင့်မှာယူထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို အရောင်းဆိုင်မှ ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူရာတွင် အပိုကုန်ကျစရိတ်များ မလိုအပ်သောကြောင့် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များအတွက် အဆင်ပြေစေမည့် တံခါးတိုင်များအထိ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဂိုဒေါင်.
ကုန်တင်ယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုများသည် လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှင့် ပင်လယ်ရေကြောင်းအချိန်ဇယားများဖြင့် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ၊ ၎င်းတို့သည် ဖောက်သည်မှသတ်မှတ်ထားသော အချိန်တိုအတွင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်နိုင်ကြသည်။ တူညီသောအကြောင်းပြချက်အတွက်၊ ဆိုးရွားသောရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်ရသည့် ကြန့်ကြာမှုများကို ဖောက်သည်များအတွက် အနှောင့်အယှက်အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် အနီးဆုံးရရှိနိုင်သည့်အချိန်သို့ အလွယ်တကူ ပြန်လည်စီစဉ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် ကုန်တင်ကားများသည် လမ်းခွင့်ပြုထားသရွေ့ မည်သည့်နေရာသို့မဆို သွားလာနိုင်သော ရထား၊ ပင်လယ် သို့မဟုတ် လေကြောင်းမှ တစ်ဆင့် အခြားမုဒ်များထက် ပို၍ ရှောင်တိမ်းနိုင်သည်။
သေးငယ်သောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ပို့ဆောင်ရာတွင် ထိရောက်မှုရှိသည်။
ရထား၊ ရေကြောင်း သို့မဟုတ် လေကြောင်း သင်္ဘောများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ရထားတွဲများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရနိုင်သောကြောင့် ထရပ်ကားသည် သင့်လိုအပ်ချက်အတွက် အသင့်လျော်ဆုံး ထရပ်ကား အရွယ်အစားကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ယာဉ်အားဖြည့်ပြီးနောက် ကျန်ကျန်ရှိသော နေရာများတွင် အလေအလွင့်ကို လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် သိုလှောင်မှုပမာဏကို အပြည့်အဝအသုံးပြုရန် ကုန်စည်များကို စုစည်းရန်နှင့် စုစည်းရန် လိုအပ်သည့်အချိန်ကို လျှော့ချပေးကာ လုပ်ငန်းငယ်များသည် ၎င်းတို့၏ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကို ပို့ဆောင်ရန်အတွက် ကား 1 စီးကို အသုံးပြုထားနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အများအားဖြင့် တိုတောင်းသောအကွာအဝေးအတွက်၊ လောင်စာဆီ၏ စျေးသက်သာသည့်အပြင် ယာဉ်အတွက် အခကြေးငွေကြောင့် အထူးသီးသန့် ထရပ်ကားဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုရခြင်းသည် ပိုမိုသက်သာပါသည်။
ကုန်တင်ယာဉ် ဝန်ဆောင်မှုများသည် ယာဉ်များ စွမ်းဆောင်ရည် နည်းပါးခြင်းကြောင့် အချို့သော ကုန်ပစ္စည်းများ အမြောက်အများ မှာယူခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် လေကြောင်းမှ မကြာခဏ တင်ပို့ရာတွင် ပိုမိုတတ်နိုင်သည်ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး တူညီသောရည်ရွယ်ချက်အတွက် ထရပ်ကားတစ်စီးလုံးကို ငှားရမ်းခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ရှည်လျားသောအကွာအဝေးအတွက်၊ ကုန်းမြေမှတဆင့်ဖုံးလွှမ်းထားသောအကွာအဝေးသည် သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်၍ သင်္ဘော သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ထားသည့်နေရာသို့ တိုက်ရိုက်ပျံသန်းသော ကုန်တင်လေယာဉ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပို၍ပို၍တိုက်ရိုက်နည်းနိုင်သောကြောင့် ကုန်တင်ယာဉ်သည် စရိတ်စကပိုမိုကုန်ကျနိုင်သည်။
အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပုံစံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ထရပ်ကားဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် ငြင်းမရနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးအချို့ရှိပါသည်။ သို့သော်၊ အလုံးစုံသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းအဖြစ် ကုန်တင်ကားအသုံးပြုမှုကို ကန့်သတ်ထားသည့် အချို့သော အားနည်းချက်များရှိနေသေးသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကုန်တင်ကား၀န်ဆောင်မှုစာရင်းသွင်းလေ့ရှိသော ဖောက်သည်များသည် များသောအားဖြင့် ပမာဏနည်းသော၊ ထုတ်လုပ်သော သို့မဟုတ် နီးစပ်ရာနေရာမှရရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများ လိုအပ်ပြီး/သို့မဟုတ် အဆက်မပြတ်နှင့် မကြာခဏ တင်ပို့မှုလိုအပ်ပါသည်။
ဥပမာများတွင် ပါဝင်သော်လည်း ကန့်သတ်မထားပါ။
လတ်ဆတ်သော ထုတ်ကုန် အမျိုးအစား
M&P International Freights သည် နိုင်ငံတကာဖောက်သည်များ၏ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည့် စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် တည်ရှိသော တစ်ခုတည်းသော ရပ်တန့်သင်္ဘောဖြေရှင်းချက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ ရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်တစ်စောင် ပေးပို့ရုံဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံရှိ ဖောက်သည် ဝန်ဆောင်မှု ဝန်ထမ်းများက သင့်အား ဝမ်းမြောက်စွာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။